“မျက်ရည်နဲ့စီးတဲ့မြစ်” ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
“မျက်ရည်နဲ့စီးတဲ့မြစ်” Author: lu bo | 9:56 PM | No မှတ်ချက် | ဖိုး စိုး သူ
အဖေမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားလို့မရဘူး။ အဖေဟာ မနက် ၂ နာရီဆိုတာနဲ့ ခြံတံခါးရှေ့မှာ စက်ဘီးရပ်နေကြ။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူနေကြ။ ခြံရှေ့ထိုင်ခုံလေးမှာ ခဏထိုင်ပြီး ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ဖွာနေကြ။ ပြီးတော့မှ အိမ်ထဲကို ၀င်လာတယ်။ အဖေဟာ ဆယ်မိုင်ခရီးကို စက်ဘီးနဲ့ အသွားအပြန်လုပ်တယ်။ အဖေဟာ တက်ကြွတဲ့အလုပ်သမား။ အဖေဟာ သားဆိုးတစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်။ ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ခင်ပွန်း။ အဖေဟာ စက်ဘီးတစ်စီးကလွဲပြီး ဘာမှ မပိုင်ခဲ့တဲ့သူ။ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ သုံးထောင်ရှိရင် တစ်ထောင်ကို သားအတွက် ထားပေးတတ်တဲ့သူ။ အဖေဟာ အဖေတစ်ယောက် တိတိကျကျဖြစ်ချင်ခဲ့ယုံကလွဲပြီး ဘာဆို ဘာကိုမှ အလေးမထားခဲ့။ အဖေမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားလို့မရဘူး။ ……………………………………………………………. မနက် ဆယ်နာရီလောက်ဆို အခန်းထဲမှာ ပူနေပြီ။ အဖေလည်း နေရောင်ကြောင့် မအိပ်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီတော့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ပဲ အိပ်ယာထရတယ်။ အဖေဟာ ပြတင်းပေါက်က နေရောင်ကို ကာကွယ်ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ မကြိုးစားခဲ့တဲ့သူ။ အဖေဟာ သူ့အခန်းထဲက စားပွဲလေး ခြေထောက်မညီတာကိုတောင် နှစ်တော်တော်ကြာ တည်မြဲစေခဲ့တဲ့သူ။ အိမ်ခြေရင်းက သရက်ပင်ကို မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ ရေလောင်းနေတတ်တဲ့သူ။ အဖေဟာ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ပျက်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော့်ကြောင့် ဒဏ်ရာရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော့်အကြောင်း ဒိုင်ယာရီထဲမှာ ရေးတတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော့်ကြောင့် မျက်ရည်ကျရတယ်။ အဖေမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားလို့မရဘူး။ ………………………………………………………………. အဖေဟာ ထမင်းစားပွဲတွေမှာ ထမင်းပန်းကန်သုံးခု အတိအကျ ရှိစေချင်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒါကို စနစ်တစ်ခုလို့ထင်တယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အဆုံးစွန်အထိ ပိတ်ပင်နေတယ်လို့ ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာ အက်ကြောင်းတွေရှိခဲ့တယ်။ အမြင်မတူတာတွေ၊ သွေဖယ်တာတွေ၊ စကားမပြောပဲ မျက်နှာလွှဲနေတာတွေ သိပ်ရှိတယ်။ အဖေဟာကော်ဖီသောက်ရတာကို ကြိုက်တယ်။ ဈေးအပေါဆုံးဆိုတဲ့ ကော်ဖီမျိုးကို သူအမြဲရွေးသောက်တယ်။ ကျွန်တော်က သိပ်ပြီးကောင်းတဲ့ ကော်ဖီတွေအကြောင်း ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ဂုဏ်ယူသလို ကြည့်ရုံကလွဲပြီး သိသာတဲ့ ခံစားမှုကို မပြခဲ့တဲ့သူပဲ။ အဖေဟာ တစ်ချို့ဖခင်တွေလို ဘ၀နေနည်းအကြောင်း ကျွန်တော့်ကို မဆုံးမဘူး။ လူတွေကြားထဲမှာ ကျွန်တော့်အကြောင်း ပြောချင်ရုံကလွဲပြီး ကျွန်တော့်ဆီက ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်ဘူး။ ညဖက်….။ အလုပ်မသွားရတဲ့ ညဖက်တွေမှာ ခြံတံခါးကို ပိတ်ဖို့က အဖေ့အလုပ်ပဲ။ အဲဒီအတွက် သူကျွန်တော့်ကို စောင့်ရတယ်။ စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ ညဖက်လမ်းတွေမှာ လိုက်ရှာရတယ်။ သူကျွန်တော့်ကို ရှာတွေ့သည် ဖြစ်စေ၊ ရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်စေ ကျွန်တော် သူနဲ့ ပြန်မလိုက်ဘူးဆိုတာ သိရက်နဲ့ အဖေဟာ ကျွန်တော့်ကို အချိန်အကြာကြီး လိုက်ရှာနေတတ်တယ်။ အဖေမရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်ခံစားလို့မရဘူး။ ………………………………………………………………………… ခြံရှေ့က မြေနီလမ်းကို နွေရာသီတွေမှာ အဖေ အမြဲရေလောင်းနေကြ။ ခြံရှေ့က ထိုင်ခုံမှာ ကျွန်တော် ရှိနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ အဖေဟာ ရေလောင်းနေကြ။ အဖေကျွန်တော့်ကို ရေလောင်းစေချင်လား၊ မလောင်းစေချင်ဘူးလား ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးဘူး။ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေကို ထိုင်ခုံပေါ် တင်ထားပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျွန်တော်
တာဝန်ကျေသွားပြီ။ ခြံထဲက ရေတုံကင်မှာ အဖေရေနှိပ်နေရတာ၊ ရေပုံးထဲက ရေတွေ လမ်းလျှောက်တိုင်း စင်ကျနေတာ ကျွန်တော် တွေ့တာပဲ။ ကျွန်တော် ထိုင်ခုံက ထထွက်လာလိုက်တယ်။ အဖေကတော့ ဆက်ပြီးရေလောင်းနေတုန်း။ ………………………………………………………………………… အဖေ့အသားတွေ ညိုလာလိုက်တာ။ ခြံထဲမှာ စံပယ်တွေ
ပွင့်ကြပြီ။ ထမင်းစားပွဲတွေမှာ အမေ့ကို ဒူးနာလိုက်တာကွာ…လို့ အဖေ ညည်းတတ်ပြီ။ သူ့ခေါင်းပေါ်က ခပ်ပါးပါးဆံပင်တွေအတွက် အနက်ရောင် ဆိုးဆေးတစ်ဗူး
အဖေ၀ယ်လာတတ်ပြီ။ အဖေ့မှာ သိချင်စိတ်တွေများလာပြီ။ ကျွန်တော့်ကို စကားငါးခွန်းပြောရင် သုံးခွန်းက မေးခွန်းတွေ။ အဖေ ဘာကိုများ သိချင်နေပါလိမ့်။ ကျွန်တော် မဖြေချင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာလည်း ဖြေစရာဆိုလို့ တိတိကျကျ မရှိဘူး။ နွေရာသီထပ်ခါ ထပ်ခါ ရောက်လာတဲ့ အချိန်တွေအထိ ကျွန်တော်က အဖေ့ရဲ့ လခထုတ်ရက်တွေကို မျှော်လင့်တကြီး ရှိနေတတ်တုန်း။ အဖေမရှိတော့ဘူးလို့ ကျွန်တော် ခံစားလို့မရဘူး။ ………………………………………………………………………… အဖေ့ရဲ့ လစာအိတ်က အ၀ါရောင်။ အဲဒီအပေါ်မှာ အဖေ့နာမည်ကို ဘောပင်နဲ့ ရေးထားတယ်။ အဖေဟာ လကုန်ပြီး သုံးရက်အတွင်းမှာပဲ အဲဒီ စာအိတ်လေးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။ သူ့ရဲ့ပျက်လုနီးနီး စက်ဘီးလေးကိုတောင်မှ မပြင်နိုင်မဆင်နိုင်။ ကတ္တီပါဖိနပ်လေးတစ်ရန်ကိုတောင်မှ မ၀ယ်နိုင်။ နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်မှ မိုးယိုနေတာကိုလည်း မပြင်နိုင်။ အဖေဟာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်တင်မက သူကိုယ်တိုင်ပျက်စီးနေတာကိုတောင်မှ မပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အမေကတော့ အဲဒီနေ့တွေမှာ အဖေစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်တဲ့။ အဖေဟာ တစ်ချို့ အခြေအနေတွေအတွက် ကျွန်တော့်ကို သိစေချင်ခဲ့တယ်တဲ့။ ဘ၀ထဲမှာ ဘာကိုမှ တိတိကျကျမလိုချင်ခဲ့တဲ့ အဖေက ကျွန်တော့်ကိုတော့ အတိအကျလိုချင်နေခဲ့တယ်။ ………………………………………………………………………… မရည်ရွယ်ပါပဲ ကျွန်တော်ဟာ ခြံဝင်းထဲကို နွေရာသီတွေ သယ်…သယ်လာမိတယ်။ အရာရာက တိတ်ဆိတ် ခြောက်ကပ် ပူလောင်နေတာပဲ။ အဖေက ကျွန်တော့်ကို ကြည့်တယ်။ အဲဒီ မျက်လုံးတွေကို ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ မခံနိုင်ခဲ့။ နွေရာသီကို အိမ်ထဲမှာ ထားခဲ့ပြီး ကျွန်တော် အဝေးကို ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ ……………………………………………………………….. အဖေ စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။ အဖေဟာ ဒိုင်ယာရီလည်းမရေးနိုင်၊ ခြံထဲက သစ်ပင်တွေလည်း ရေမလောင်းနိုင်၊ ညဖက်တွေမှာလည်း အိပ်မပျော်နိုင်။ သူဟာ အိမ်ပြန်လာတိုင်း နှစ်ပန်းကန်သာရှိတဲ့ ထမင်းစားပွဲလေးနဲ့ အမြဲရင်ဆိုင်ရတယ်။ အဖေဟာ တိတ်ဆိတ်လာတယ်။ သီးသန့်ဖြစ်လာတယ်။ အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘွဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို သူ့အခန်းထဲ ပြောင်းချိတ်ရုံကလွဲပြီး အဖေဟာ
ဘာဆိုဘာမှ အပြောင်းအလဲ မလုပ်တော့ဘူး။အဖေမရှိတော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် ဘယ်လိုလုပ် ခံစားလို့ရမှာလဲ။ …………………………………………………………….. အဲဒီနေ့က အဖေ ကျွန်တော့် အကြောင်းမေးတယ်။ ဒါဟာ နောက်ဆုံးမေးခြင်းပါပဲ။ အမေကတော့ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး ပြန်လာဖို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှ မသိဘူး။
ကျွန်တော် မရှိတဲ့ နှစ်တွေမှာ အဖေ ဘယ်လောက်အထိ ပင်ပန်းခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် မသိဘူး။ သူမြတ်နိုးတဲ့ သရက်ပင်လေးတွေရှိတဲ့ ခြံတစ်ခြမ်းကို ကျန်းမာရေးကြောင့် ရောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် မသိဘူး။ အဖေ့မှာ သွေးကင်ဆာ ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် မသိဘူး။ နောက်ဆုံး….အရာရာကို ကျွန်တော် သိလိုက်တဲ့ နောက်ဆုံးကျတော့ အဖေဟာ ကျွန်တော့်နားက ထွက်သွားခဲ့ပြီ။ ……………………………………………………………. ကျွန်တော် ပြန်လာခဲ့ပါတယ် အဖေ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် နောက်ကျခဲ့တယ်။ ဘ၀နဲ့ချီပြီးတော့ နောက်ကျခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ဟာ ဘယ်တော့မှ အသစ်ပြန်ဖြစ်လာတော့မယ် မထင်ဘူး။ ကျွန်တော့်အခန်းထဲမှာ “နောင်တ” ဆိုတာကို လေးနှစ်ကြာတဲ့အထိ ကျွန်တော် ပိတ်လှောင်ထားခဲ့တယ်။ လေးနှစ်ရှိခဲ့ပြီ အဖေ။ ကျွန်တော် နောင်တရနေခဲ့ရတာ…ကျွန်တော် ငိုနေခဲ့ရတာ….ညဖက်တွေမှာ ကျွန်တော် ထိုင်ပြီး သတိရနေခဲ့ရတာ လေးနှစ်အထိ ရှိခဲ့ပြီ။ အရာရာကတော့ မနေ့ကလိုပဲ အဖေ။ ကျွန်တော့်
ကို ဆွဲထူပါဦး အဖေရယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော် လဲကျခဲ့တုန်းက အဖေ ထူခဲ့သလို ကျွန်တော့်ကို ဆွဲထူပေးပါဦး။ ကျွန်တော်ဟာ မျက်ရည်နဲ့စီးတဲ့မြစ်ပဲ အဖေ။ အဖေမရှိတော့ဘူးဆိုတာ ……….. ကျွန်တော်……..ဘယ်တုန်းကမှ……..ခံစားလို့……မရခဲ့ပါဘူး။lkု